XOG: Qaabkee ayaa loo qabtay saddex ka mid ah raggii weeraray Hotelka Naasa Hablood 2? – XAMAR POST
XOG: Qaabkee ayaa loo qabtay saddex ka mid ah raggii weeraray Hotelka Naasa Hablood 2?
By Mohamed Ahmed On Oct 29, 2017
Ciidamada dowladda Federalka Somaliya, gaar ahaan ciidanka NISA, ayaa ku guuleystay xalay waqti dambe inay gacanta ku dhigaan saddex ka mid ah dableydii ka tirsaneyd Ururka Al Shabaab ee shalay casir liiqii weerarka ku qaaday Hotelka Naasa Hablood 2 ee Degmada Xamar weyne.
Raggan la qabtay waxa ay xirnaayeen tuutaha ciidanka dowladda, saacado badan ayaa waxa ay ka dagaalamayeen qaybta hoose ee dhismaha Hotelka Naasa Hablood 2 illaa ugu dambeyn ay ka go’day rasaastii ay ku dagaalamayeen.
Saacada markii ay aheyd 3:00 habeenimo ee xalay, ayaa saddexdan nin waxa ay si farsameysan uga soo baxeen dhismaha Hotelka, iyadoo uu socdo dagaalka, ciidanka dowladda intooda ugu badan waxa ay saarnaayeen dabaqa kore ee Hotelka, halka qaar kalena ay joogeen banaanka hotelka.
Dhismaha Hotelka oo aad u burburay awgeed, saddexdan nin ayaa waxa ay ka soo dhex baxeen meel ka mid ah meelaha uu ka burburay Hotelka, waxaana ay cagta saareen wadada laamiga ah ee Hotel Naasa Hablood ka timaada una dhaqaaqda dhanka taalada Xaawo Taako.
Markii nimankaan ay ka soo dhex baxeen dhismaha Hotelka oo ay isku dayayeen inay baxsadaan ayaa waxaa arkaayay ciidamo ka tirsan NISA oo eryaday raggaan, waxaana ugu dambeyn lagu qabtay meel ku dhaw taalada Xaawo Taako.
Raggan oo watay qoryaha Ak47 ayaa qoryahooda waxa ay ahaayeen billaa rasaas, umana aysan suuragaleyn inay dagaalamaan oo ay iska sii caabiyaan ciidanka dowladda Federalka Somaliya.
Markii la xaqiijiyay raggaan oo badqaba in ciidanka ay gacanta ku dhigeen, ayaa waxa ay Saraakiisha ciidanka Nabad Suggida shaaciyeen in la soo afjaray weerarka Hotelka, maadaama raggii Hotelka dhexdiisa lagula dagaalamaayay gacanta lagu dhigay.
Dableyda Hotelka soo weerartay ayaa tiradooda waxa ay gaareysay Shan ruux oo mid ka mid ah uu isqarxiyay, halka mid kalena ciidamada ay ku dhex toogteen Hotelka dhexdiisa, saddexdii kalena iyaga oo nool gacanta lagu dhigay.
Dowladda Turkiga oo War kasoo saartay Qaraxii Hoteelka Naasa hablood
XOG: Farmaajo oo xeelad kale u Bedelay Qorshihii uu xilka kaga tuuri rabay Xaaf